Indlu enolwandle lwabucala
Ifumaneka kwilali yaseBorbon, eCebu, phila ubomi obuzolileyo njengabahlali. Ngokungafaniyo nezinye iipropati zaselwandle, indawo igcwele imithi kwaye ngoko ipholile. Relax phakathi kwezityalo zendalo kunye neeorchids okanye uthathe i-nap kwi-sofa ngaselwandle.
Le yipropathi enehektare enye enebungalows ezimbini (zonke zidweliswe) ezinonxweme lwabucala. Inegadi enkulu kwaye yindawo yokugcina imithi yemveli. Ipropathi iya kuba yenzelwe ukusetyenziswa kwakho kuphela ngexesha lokuhlala kwakho.
Yindawo ezolileyo emalunga nemizuzu eli-10 ukusuka kumbindi wedolophu kodwa abantu banobuhlobo. Ukuba uyadinwa kukupheka i-carenderia engummelwane (ivenkile yokutya yakwiiPhilippines) iya kukuvuyela ukuphekela ukutya. Onke amalungiselelo okupheka aya kuba phakathi kwakho kunye nevenkile.
Sihlala eDolophini ngoko ke asizubakho ngokobuqu. Sinomgcini-gadi/umgcini wegadi kunye nomgcini-ndlu kwindawo ukuze bakwazi ukuhoya iimfuno zakho. .